किटनाषक प्रयोग गर्दासमेत घरमा कम हुँदैनन् साङ्ला ? कारण रोचक छ - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com किटनाषक प्रयोग गर्दासमेत घरमा कम हुँदैनन् साङ्ला ? कारण रोचक छ - खबर प्रवाह
एजेन्सी :भान्छामा यताउती दौडिरहेको, भाँडाकुँडा चाहरिरहेको, दराजमा भित्र–बाहिर गरिरहेको साङ्लाबाट पार पाउन यदि तपाईंले हिजोमात्रै किटनाशक हाल्नुभएको र त्यसले केही असर गरेको छैन भने अचम्ममा नपर्नुहोस् ।
किनभने तपाईंको किटनाषक ती साङ्लामाथि बेअसर भएको छ ।
हालै अमेरिकाको इन्डियानाको परड्यु युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले एक अध्ययन गरेका छन् जसमा साङ्लाले किटनाशक पचाउन थालेको पत्ता लगाएका छन् । अर्थात्, उनीहरुले किटनाषकबाट बच्ने तरिकाको खोजी गरेका छन् ।
वर्षौंदेखि हामी केमिकलको मद्दतले किराको बढ्दो जनसंख्या रोक्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।
साधारणतया साङ्लालाई भगाउनका लागि कुनै रसायनको प्रयोग गरिन्छ । यदि त्यसले काम गरेन भने हामी अन्य रसायनको प्रयोग गरेर हेर्छौं । थुप्रैपटक भिन्न–भिन्न किटनाषकलाई मिसाएर पनि कोसिस गर्छौं ।
तर अनुसन्धानकर्ताका अनुसार संसारभरीका शहरमा तीब्र रुपमा बढिरहेको जर्मन साङ्लोमाथि विभिन्न प्रकारका किटनाषकले कुनै असर गरिरहेको छैन ।
वैज्ञानिकले ती किटनाशकको प्रयोग गरे जुन सर्वसाधारणका लागि बजारमा उपलब्ध हुन्छन् । कम्पनीले किरा–फट्याङ्ग्रा भगाउन प्रयोग गर्ने किटनाषकको पनि प्रयोग गरेर हेरे ।
उक्त अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकले बीबीसीसँगको कुराकानीमा साङ्लाले खाओस् भनेर राखिने किटनाषकलाई पनि अध्ययनमा संलग्न गरेको बताए ।
वैज्ञानिक डी. गोंढलेकरले भने, ‘के साङ्लाले किटनाषकप्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित गरिरहेको छ भन्ने यो विषयमा कुनै अध्ययन भएको छैन । नयाँ पीढिका साङ्लामाथि बजारमा पाइने सबै किटनाशकले कुनै असर नगरेको पाइनु निकै अचम्मको कुरा हो ।’
वैज्ञानिकले आफ्नो स्याम्पलमा किटनाषकलाई परिवर्तन गरीगरी हेरे, तर यो प्रयोग पनि विफल रह्यो ।
बढ्दो किराफट्याङ्ग्रा र स्वास्थ्यमा हानी
विशेषज्ञका अनुसार साङ्लाको यो रोग प्रतिरोधक क्षमताका कारण उनीहरुको बढ्दो संख्यामा लगाम लगाउन मुश्किल हुनेछ ।
जसका कारण उनीहरुबाट फैलने रोगको खतरा पनि बढ्नेछ ।
गोंढलेकर बीबीसीसँग भन्छन्, ‘साङ्लाको दिसामा एलर्जी पैदा गर्ने तत्व हुन्छ जसका कारण दम हुनसक्छ । यसबाहेक साससँग जोडिएका रोग लाग्ने खतरा पनि हुन्छ । ’
यी किरा खाना भएको ठाउँमा बस्न रुचाउँछन् जस्तै किचनको सतह, दराज वा चुल्होमा । उनीहरुले त्यहाँ यस्ता ब्याक्टेरिया छोड्छन् जसका कारण पेटसम्बन्धि गम्भीर समस्या र झाडापाखाला हुनसक्छ ।
वैज्ञानिकका अनुसार साङ्लाको नियन्त्रण शहरको विकास र उनीहरुको किरासँग जुध्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ ।
जुन स्थानमा कम स्रोत साधन हुन्छन् त्यहाँ किराको नियन्त्रणमा धेरै समस्या निम्तिनेछ ।
यस्ता समस्यालाई कसरी सुल्झाउने ?
साङ्ला शहरमा बिगबिगी पाइने किरा हो । यी जीवका लागि भवन र ठूला डस्टबिन निकै उत्कृष्ट घर हो ।
जब एउटा किटनाषकले काम गर्न बन्द गर्छ तब अर्को बनाइन्छ । तर प्रभावकारी फर्मुला बनाउन समय लाग्नसक्छ ।
त्यसकारण वैज्ञानिकले यस्ता सजिलो तरिका बताएका छन् जसमार्फत् तपाईं आफ्नो घरलाई साङ्लाको अड्डा बन्नबाट बचाउन सक्नुहुन्छ ।
–ती स्थानलाई सफा गरिरहनुहोस् जहाँ धुलो, गर्मी वा खानाको टुक्रा जम्मा हुन्छन् ।
– एकै प्रकारका किटनाषकको प्रयोगलाई निरन्तरता नदिनुहोस् । यदि किटनाषक छर्कंदा साङ्ला कम भएकमा छैनन् भने अन्य केमिकलको प्रयोग गर्नुहोस् । नभए उनीहरु त्यसबाट आफ्नो प्रतिरोधक क्षमता विकसित गर्नेछन् ।
– खानालाई खुल्ला नछोड्नुहोस् ।
– फोहोरको डिब्बालाई नियमित सफा गरिरहनुहोस् ।
– ओसिलो ठाउँलाई बारम्बार सफा गरिरहनुहोस् ।
वैज्ञानिकले आफूमा सफा गर्ने बानीको विकास गरेर यी किराको समस्याबाट उम्कने सकिने बताएका छन् ।
के हाे क्यान्सर ? क्यान्सरबारे ९ प्रश्न र विशेषज्ञका उत्तर
दुनियामा वनजंगलको क्षेत्रफल घटिरहेको छ । वनस्पतिहरु नासिँदैछन् । वन जोगाउन तथा बढाउनका लागि विश्वभर नै विभिन्न उपाय अपनाउने गरिएको छ । यसै क्रममा एउटा देशले वनजंगल बढाउन तथा पर्यावरण जोगाउन गज्जबको उपाय अपनाएको छ । फिलिपिन्सले यस्तो नियम लगाएको छ कि अब त्यहाँका विद्यार्थीले स्नातक तहको डिग्री हासिल गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा कम्तिमा १० […]